WHO Inotara Chirwere cheCoronavirus seDambudziko rePasi Rose Rinoda Kubatwa neChimbichimbi
Mukuru weWorld Health Organization (WHO) Doctor. Tedros Adhanom Ghebreyesus
Sangano rinoona nezvehutano pasi rose reWorld Health Organisation, WHO, rakatara nemusi weChina kuti chirwere chanetsa che coronavirus, icho chauraya vanhu vanosvika zana nemakumi manomwe pasi rose, chitorwe sechirwere chavhiringa pasi rose chinofanirwa kutariswa nekukasika.
Vachizivsa nezvedanho iri, mukuru wesangano iri, Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus vakati chikonzero chikuru chaita kuti vatore danho iri hachisi pamusoro pezviri kuitika muChina kwete, asi zviri kuitika mune dzimwe nyika.
Chirwere ichi, icho chabata vanhu vanodarika zviuri zvinomwe nemazana manomwe, chinonzi chapindawo mune dzimwe nyika gumi nesere, dzinosanganisira America, Germany, Vietnam, France, Japan neCanada.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvirwere, uye vari mukoti pane chimwe chipatara chiri muRockville mudunhu reMaryland muAmerica, Muzvare Oppah Chiweshe, vanoti vanoona kuti WHO yatora danho rakanaka chose.
Muzvare Chiweshe vanoti sangano iri rinogona kunge ratora danho irori nekuona kwayo kufambidzana kuri kuita vanhu venyika dzakasiyanasiyana, izvo zvinogona kuita kuti chirwere ichi chipararire munyika dzakawanda nekukasika.
Vanoti zvakakoshawo zvikuru kuti vanhu vakoshese kutsanana munzvimbo dzavanoshandisa dzakaita sezvimbuzi kana kumabasa, sezvo kuchisangana vanhu vakasiyanasiyana.
Hurukuro naMuzvare Oppah Chiweshe